myanmar | yestoyse
မြန်မာ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ အနော်ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်၊ အလောင်းမင်းတရား ဆိုတဲ့ မင်းသုံးပါးလက်ထက်မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး တပေါင်းတစည်းတည်း ...
Everyone knows China, India, and Thailand. But when you ask them about Myanmar, most often tilt their heads withapuzzled expression. Well,